खोप लगाउने फाराममा जात उल्लेख गरेकोप्रति कलाकार यश कुमारको आपत्ती – Nepal Press
खोप लगाउने फाराममा जात उल्लेख गरेकोप्रति कलाकार यश कुमारको आपत्ती
२०७८ जेठ १० गते १९:०९
काठमाडौं । कोरोनाको खोप लगाउनका लागि भरिने फारामका जात उल्लेख गरेकोप्रति कलाकार यश कुमारले आपत्ती जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियाेमार्फत कोरोनाको खोप लगाउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भर्न लगाएको अनलाइन फाराममा जात उल्लेख गर्न लगाएकोप्रति उनले आपत्ती जनाएका हुन् ।
‘सायद म गलत पनि हुनसक्छु, मैले नबुझेको पनि हुनसक्छ । सायद जात हेरेर नै चीन र भारतले खोप पठाएको हुनसक्छ ।’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘मधेशी भनेको के ? मधेशमा बसेको सबैलाई मधेशी भन्न खोजेको हो कि लुंगी लगाउने मधेशीलाई भन्न खोजेको हो । प्रधानमन्त्री पनि तराइमा नै जन्मेको हो, उहालाइ के भन्ने ? अहिले मान्छे कसरी बाच्ने भन्ने अवस्थामा जात छुटइएको छ । के अहिले नेपाली नागरिकता बोकेर गएको आधारमा खोप लगाउन पाइदैन ? के यो सहि हो ?’
बिदेशीलाई पनि समातेर खोप लगाउनुपर्ने बेला नेपालीको नै जात सोध्नुपर्ने किन ? भन्दै थप प्रश्न गरकेा छन् । आफुलाई जहिले पनि जातीय छुवाछुतको कुरा उठाउँछ भनेर आफुलाई आरोप लाग्ने गरको बताउदै भने, ‘अब हेर्नुहोस, यस्तो अवस्थामा मैले कसरी नबोल्नु ? म कसरी लाटो भएर बस्ने ?’
कलाकार यश कुमारले नवराज विकसहित ६ जनामाथी भएको विभत्स हत्याकाण्डको पनि स्मरण गर्दै मृतकप्रति श्रदाञ्जली पनि व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारी निकायबाट नै खोप लगाउने ठाउँमा जातको कुरा गरेर झन पिडा दिन खोजेको बताए । अन्तिममा आफुले गलत बुझेको भए माफी दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
#कलाकार यस कुमार
प्रकाशित: २०७८ जेठ १० गते १९:०९
One thought on “खोप लगाउने फाराममा जात उल्लेख गरेकोप्रति कलाकार यश कुमारको आपत्ती”
Vishnu KC says:
राज्य बाट लिने सुबिधामा चाँही जात लेखाउन हुने राज्यले दिने सुबिधा दलितको नाममा ग्वाम्म खान हुने अनी खोप लगाउने फारममा चाँही भर्न नहुने ? जात भात होइन सोच बदलौ मित्र